Ubuntu TV ဘာတွေမရှိတော့ဘူးလဲ။ | Linux မှ
Ubuntu TV ဘာတွေမရှိတော့ဘူးလဲ။
ယခုအချိန်တွင်၏သတင်း: Canonical မှ လက်ဆောင် CES (လူသုံးကုန်အီလက်ထရောနစ်ပြပွဲ) Las Vegas မှသူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Ubuntu ကို ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်, ဖြစ်ကောင်းဘယ်အရာကိုမျှော်လင့် Apple ငါစိတ်ထဲရှိခဲ့ပါတယ်။
တဖကျတှငျ, တကယ့်အကြီးအရာတစ်ခုခုနဲ့တူပုံရသည်။ Ubuntu ကို ၏ဖြန့်ဖြူးသည် GNU / Linux များ ဒီနှုန်းထားအတိုင်းသွားမယ်၊ ဒီလိုရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အမျိုးအစားမျိုးကိုမဆိုရှာတွေ့နိုင်မှာပါ (ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များ၊ ကားများ၊ လေယာဉ်စသည်တို့) ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ပူစရာပါ။ သူတို့အရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား?
ငါအောက်ပါအကောင့်ကိုရလိုက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာတွင်အချိန်မရှိသောကြောင့်သူတို့သည်အမှားအယွင်းများပါသောဗားရှင်းများစွာကိုထုတ်ပေးခဲ့လျှင်၎င်းသည်စီမံကိန်းများစွာကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိန်းသိမ်းရန်မည်သို့စီမံမည်နည်း။ ငါလက်ခံတယ်၊ ငါနည်းပညာနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်၊ မှတ်ချက်တစ်ခုမှသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားမှားကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
နေတုန်းပဲ Ubuntu ကို ကွန်ပြူတာဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးချင်နေပြီဖြစ်သည်။ နည်းဗျူဟာပြောင်းလဲမှုလား။ လက်ရှိယှဉ်ပြိုင်မှုဘယ်မှာနေလဲ။ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး Canonical မှ တီဗီထုတ်လုပ်သူများကိုသူတို့၏ OS ကိုအသုံးပြုရန်စည်းရုံးခြင်းသည်ကြိုးစားခြင်းထက်နိဂုံးချုပ်သည်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့နေသောဗွီဒီယိုများကိုမြင်ရလျှင်၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းမထားပါ။ ရှိပြီးသား Linux ကို တီဗီမှာအချိန်ကြာနေပြီ (Samsung နှင့် Sony တို့ကိုမေးပါ) နှင့်များစွာသောအခြား devices များပေါ်တွင်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်ကမကောင်းတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ခြေမှဒီစီမံကိန်းကိုမင်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းစေချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာမင်းသာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်။ ငါသူတို့အဘို့မိမိတို့ဗားရှင်းတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ် PC, ယခုတိုင်အောင်, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားရပ်တန့်ပါပြီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu TV ဘာတွေမရှိတော့ဘူးလဲ။
“ များများဖုံးအုပ်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးညှစ်တယ်” လို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။
Canonical သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူတော်စင်အဖြစ်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောသီလကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ Linux ကိုအိမ်သုံးအသုံးပြုသူထံအခြား distro များကဲ့သို့ပိုမိုနီးကပ်စွာသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ အနည်းငယ်သာမဟုတ်သော Apple, Google နှင့် Microsoft ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူများစွာနှင့်မတူသည်မှာဤအစပျိုးမှုများကိုဖွံ့ဖြိုးစေသောအဓိကလုပ်ငန်းဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ဤလောကတွင် Ubuntu မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များသည်ပုံမှန်clichésများထက် ကျော်လွန်၍ Linux ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်များကိုဖွင့်ပေးသည်။
ကောင်းပြီ၊ အဆုံးမှာငါပြောခဲ့တာကမင်းကံကောင်းမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိသူက GNU / Linux ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အတိအကျဆိုရလျှင်သူငယ်ချင်း၊ ၎င်းသည်ဤနှင့်အခြားစီမံကိန်းများနှင့်အတူ Canonical ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမည့်သဘောထားဖြစ်သည်။ တ ဦး တည်းအခြမ်းနှင့်အခြားထွက်၏ fanboys ။
elav စကားလုံးအားဖြင့်၊ qupZilla ရှိ user agent ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုမတော်တဆတိုက်ဖျက်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များတွင် Safari ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျသည်မဟုတ်ပါ။ xD
အကယ်၍ ၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပြီးပျက်ကွက်သလားသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ Canonical နှင့် Ubuntu တို့အပေါ်ဝေဖန်မှုများသည်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Linux သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်၊
Gaara, ငါပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်မှာငါပြောခဲ့တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါရည်ညွှန်းတဲ့ distro ဒါမှမဟုတ်မြင်နိုင်တဲ့ ဦး ခေါင်းရှိခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တာကိုငါသိတယ်၊ ဆိုလိုတာကဒီတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုနှစ်ခုလုံးက \_ t ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်းကိုသာကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထိုရွေ့လျားမှု၏အကျိုးဆက်များသည်များပြားသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပါ ၀ င်ပတ်သက်စေသည်။ Canonical တစ်ခုတည်းကသာလျှင်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးအတွင်း၌အခြားစျေးကွက်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများကိုကြီးမားသောပြင်းထန်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ သင်တန်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို။
Ubuntu အချိန်ကြာမြင့်စွာသင်ကြားခဲ့သောလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ သို့သော် Linux ကိုဖြန့်ရန်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်ဆိုပါက၎င်းသည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ငွေရှာနည်းဖြစ်သည်။ Canonical သည် NGO မဟုတ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သောအခြားများစွာသောစီမံကိန်းများမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည် Linux ကိုဖြန့်ကျက်သွားပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကျွန်တော့်ကြောက်ရွံ့မှုကအလွန်အမင်းပျက်ကွက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မှသာ၎င်းသည် linuxeros ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။
ကောင်းပါပြီ။ Ubuntu သည်အခြားစျေးကွက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရန်စိတ်ကူးနှင့်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ Ubuntu သည်ကျွန်ုပ်ကို“ အလေးအနက်” ထည့်သွင်းခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်၊ ဒီတော့ဒီကျူးကျော်မှုကကျွန်တော့်လို Linux ကိုလုံ့လဝီရိယမသုံးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
မင်းကိုဒီမှာလာလည်ပတ်တဲ့ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ သင့်ကိုကြည့်ပါ၊ ငါဟာနည်းပညာအကြောင်းဗဟုသုတရှိရင်ဒီကဏ္withမှာရှိနေတဲ့အခြား "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" မျိုးကွဲတွေအကြောင်းပြောလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါကဒီ Canonical ပဏာမခြေလှမ်းကိုထောကျပံ့ပေးကြောင်းငါရှာ ... o.0
ဟမ်၊ ငါတို့အသုံးပြုသူများကိုလှောင်ပြောင်သရော်မှုများ မှလွဲ၍ Gaara မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မသိပါ။
ကျနော့်အမြင်အရ Cannonical ကောင်းရင် Free Software လောကကအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုရင် Canonnical နဲ့ Ubuntu တို့မှာကျရှုံးလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Kernel ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေ၊ စီးဆင်းမှုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သလဲ။ Mint, Arch သို့မဟုတ် Debian စသည့်ဖြန့်ဝေမှုများဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
ဤနည်းအားဖြင့် linux နှင့်တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့် SF သည်ဘုံနှင့်ရိုင်းသောသဘောအရတရားဝင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တည်ရှိဆဲသောဒဏ္myာရီများကိုဖြိုဖျက်ရန်စတင်နေသောကြောင့်သူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဆုံးရှုံးရန်ထက်အမြတ်ရရန်များစွာရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဒီစာမူခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလိုက်တယ်ကဒီရဲရင့်ခြင်းအလုပ်ပါပဲ (စကားမစပ်၊ ဒီနေရာမှာသူမပေါ်ထွက်လာဘူးလို့ထင်ရတယ်)
နောက်ဆုံး Ubuntu distros များမှာ (Ubuntu 11.10 user ဖြစ်ခြင်း) bug များနှင့်အတူတင်နေသည်ဟုမထင်ပါ။ Ubuntu သုံးစွဲသူများသိသာထင်ရှားစွာထွက်ခွာသွားခြင်းမှာ Unity ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ရိုးရှင်းသောကြောင့်အလေ့အထမရှိခြင်းကြောင့် အများကြီးပိုမြန်နှင့် Gnome3ထက်သန့်စင်ပြီး။
ခင်ဗျားပြောခဲ့သလိုသူတို့ကကမ္ဘာကြီးကို GNU / Linux ရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာ emo mode ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Ubuntu အကြောင်းရေးသားပြီးရေးသားတာမျိုး၊ ရေးသားတာမျိုး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှမရေးဘူး၊ ဤအချိန်သည်ဘလော့ဂ်ပိုစတာများအကြိုက်ဆုံး distro ဖြစ်သည်။ http://theunixdynasty.wordpress.com/2011/06/02/liberadas-2-distros-para-descerebrados-integrales/ ဟားဟား
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကကျွန်တော့်ကို netbook မှာစည်းရုံးသိမ်းသွင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် smart tv ပေါ်မှာကြည့်ရတာကောင်းတယ်။
CON 2012 မှာ Sony နှင့် samsung ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအချို့သည် HDTV များကို Smart TV များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် (usbs နှင့် kinects နှင့်ဆင်တူသည်) android နှင့်အတူထုတ်ကုန်များကိုတင်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်း Canonical အရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးခြားသည်။ ဒီအပိုင်းမှာ android ကိုယေဘူယျပြုတယ်ဆိုရင် ubuntu အတွက်တကယ်ခက်ခဲပါတယ်။ ငါမှားတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒါက La Moneda ရဲ့နောက်ဖက်တစ်ခုပါပဲ။ Android .. ဒါပေမယ့်ဘာတွေဖြစ်နေလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်။
ကျွန်တော်ဟာ Canonical-Ubuntu duet ကို Google-Android ထက်ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ Google ဟာပိုက်ဆံနဂါးတစ်ယောက်၊ ငွေသားကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ Android သုံးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရားဝင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ကျန်ရှိတော့သည်။ ထို့အပြင်သာမန်အသုံးပြုသူသည် Android နှင့် GNU / Linux ဟူသောစကားလုံးများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ
ငါ့အတွက် Mint12 မှာ mate ကိုသုံးတဲ့သူအတွက်၊ Unity မှန်ဘီလူးက default installation ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ task of YouTube လိုမျိုးကြည့်ရှုသူတွေကိုထည့်နိုင်သလို VLC နဲ့အတူဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်လို့လည်းရတယ်။
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး, ကျနော့်အမြင်, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာပိုမိုကင်းမဲ့ပေမယ့်သူတို့ကနေဆဲ "အဆီထဲမှာ" အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကပုံမှန်ထက်သာ။ ကောင်း၏နှင့်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရွေးချယ်စရာကင်းမဲ့။
Android နှင့်မတူဘဲ Ubuntu တွင် drivers များအများသုံးမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည် update လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိမဆွေးနွေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲရရှိထားသူအဖြစ်က update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
PS: ကျွန်ုပ်သည် Google အား Android drivers / drivers များကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေရန်တောင်းဆိုပြီးပါပြီ။ ၎င်းကိုသင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုမျှဝေပါ။
လက်ရှိအသုံးပြုသူများကြုံတွေ့နေရသောမီဒီယာစင်တာတစ်ခု။ သူတို့မုန့်ဖြင့်စားကြသည်။ သို့သော်ငြားလည်း…။ Linux လောကမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်ဤနယ်ပယ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စက်ကိရိယာမျိုးကိုမဆို (ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ ကားများ၊ လေယာဉ်စသည်တို့) တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ Ubuntu နှင့်အတူကားတစ်စီးသို့မဟုတ်လေယာဉ်မ ၀ င်ခင်မှာသူမနိုင်ငံသားတွေထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော့်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းခိုင်းတာကိုသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုရှာပြီးဘယ်သူ့ကိုရှာရမလဲဆိုတာပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ခရမ်းရောင်အသားအရောင် (သို့) မြည်သံနဲ့အတူ။ နောက်ဆက်တွဲ hostiazo) သေခြင်းတရားလျော့နည်းနှိပ်စက်တာ
ငါမသိ, ငါတ ဦး တည်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်, သင်တစ်ချိန်တည်းအမှုအရာ 20 မလုပ်နိုင် (တက်ဘလက်များ, တီဗီ, ကွန်ပျူတာများ ... )
Canonical သည် NGO တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမည်သူမဆိုယုံကြည်ပါသလား။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်အမှားအယွင်းမရှိသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ငါမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး၊ သူတို့ဆွေးနွေးတာကသူတို့ကတိက ၀ တ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။
Ubuntu အကြောင်းပြောရရင်လူအများစုကမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ညည်းညူကြတယ်။ ငါ့ကိုစဉ်းစားစရာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံက။
အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်မလား မတည်မငြိမ်ရုပ်မြင်သံကြားများ? စိတ်ကူးကြည့်ပါ ဦး ။
ငါသဘောတူတယ်၊ ဒါကကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငွေရှာဖို့ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကုန်ပစ္စည်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်၊ များစွာသောဝေဖန်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီး၊ သူတို့ဟာကုန်ချောထုတ်ကုန်နဲ့သိပ်မကောင်းဘူးလို့ငါထင်တယ်။ "စိုးရိမ်။
Ubuntu ဗားရှင်းတွေကဒီတီဗီဖန်ရှင်ကိုထပ်ထည့်လို့ရမလားမသိဘူး။ ကောင်းတာပေါ့။
အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်လျှင်ပို့စ်အချို့သို့မဟုတ်ခလုတ်တစ်ခုအရ -
သင်၌အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းခဲ့သောအရာများကိုကျွန်ုပ်အားစဉ်းစားစေခဲ့သည်။ သင်ကောင်းစွာထောက်ပြရုံတင်မကဘဲ Ubuntu တစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးခတ်ထားပြီးအရာရာတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရာတခုခုကို Ubuntu ကမအောင်မြင်စေခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အတွက်တရားမျှတမှုကိုဖန်တီးလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ဖောက်သည်နှစ် ဦး စလုံးအမှုအရာများအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ရှုံးနိမ့်မှုများကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာသည်၎င်းတို့အားငွေဖြင့်အလွန်ပေးဆပ်ရသောကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
Ubuntu အောင်မြင်လျှင်၎င်း Ubuntu သည်အောင်မြင်သည်။ Ubuntu မအောင်မြင်ပါက၎င်းသည် Linux တစ်ခုလုံးသို့ဆွဲလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ဟုပြောကြားသည် "ဒီ Linux က shit" တကယ်လို့သင်ကသူတို့ကို Ubuntu ပေးတဲ့အခါတစ်ခုခုပြောတာပြီးပြီ။
ငါ "Ubuntu ကိုကူညီရမယ်" ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူး၊ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့အတွက် (ငါ Ubuntu မဟုတ်သလို Linux လည်းမဟုတ်၊ OpenSource လည်းမဟုတ်၊ အနတ္တလည်း; ငါကိုယ်တိုင်နှင့်ငါ့မိသားစုပါ။ ) ငါကရှင်းပါတယ် ဒါကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဘာမှမရှိဘူး၊ ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘဏ်ကနေအံ့အားသင့်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
အနက်နှင့်အပြာ - Gnome Shell အတွက်အခင်းအကျင်း
Tor Browser စုစည်းမှုသို့မဟုတ်အမည်ဝှက်ဖြင့်မည်သို့ကြည့်ရှုမည်နည်း